Забур 18 CARS - Nnwom 18 AKCB
Awurade akoa Dawid dwom. Ɔtoo saa dwom yi maa Awurade, bere a ogyee no fii nʼatamfo nyinaa ne Saulo nsam no.
1Medɔ wo, Awurade, mʼahoɔden.
mʼaban ne me gyefo;
me Nyankopɔn yɛ me botan.
Ne mu na minya me hintabea.
Ɔyɛ me nkatabo, me nkwagye abɛn ne mʼabandennen.
3Misu frɛ Awurade; ɔno na ayeyi sɛ no,
efisɛ ogye me fi mʼatamfo nsam.
4Owu nkɔnsɔnkɔnsɔn kyekyeree me;
na ɔsɛe asorɔkye bu faa me so.
5Ɔda mu hama kyekyeree me;
mihyiaa owu mfiri.
6Mʼahohia mu, misu frɛɛ Awurade.
Misu frɛɛ me Nyankopɔn hwehwɛɛ mmoa.
Ofi nʼasɔrefi hɔ tee me nne;
7Asase wosowee na ehinhimii,
na mmepɔw fapem wosowee
wosuroe, efisɛ na ne bo afuw.
8Wusiw fii ne hwene mu;
ogyaframa fii nʼanom,
na nnyansramma dɛw fii mu.
9Ofii ɔsoro baa fam;
na omununkum kabii duruu nʼanan ase.
12Hann kɛse hyerɛn wɔ nʼanim,
na omununkum a mparuwbo ne anyinam wɔ mu fii ne ho hyerɛn mu bae.
13Awurade bobɔɔ mu fii ɔsoro;
Ɔsorosoroni no nne gyigyee bio.
14Ɔtow ne bɛmma no de bɔɔ atamfo no ahwete,
ɔde anyinam a ano yɛn den pam wɔn.
15Po mu abon ho yiyii
na asase nnyinaso ho daa hɔ,
esiane wʼanimka ne ahomegu a efi wo hwene mu no nti,
16Ofi soro baa fam besoo me mu;
17Ogyee me fii me tamfo hoɔdenfo nsam,
19wode me baa baabi a hɔ trɛw;
20Awurade ne me adi no sɛnea me trenee te;
21Manantew Awurade akwan so.
Mentwee me ho mfii me Nyankopɔn ho nkɔyɛɛ bɔne ɛ.
mimmuu nʼahyɛde so.
na matwe me ho afi bɔne ho.
24Awurade agyina me treneeyɛ
ne me nsa a ho tew wɔ nʼanim no so atua me ka.
25Woda wo ho adi sɛ ɔnokwafo kyerɛ wɔn a wodi nokware,
wɔn a wodi mu nso wokyerɛ wɔn sɛ wodi mu.
26Woyɛ kronkron ma wɔn a wɔyɛ kronkron,
na amumɔyɛfo de, wukyi wɔn.
27Wugye ahobrɛasefo nkwa,
na wobrɛ ahantanfo ase.
28Awurade, woma me kanea hyerɛn.
Yiw, woma me sum dan hann.
29Wʼahoɔden a wode ma me nti, mitumi ka asraafo gu;
me Nyankopɔn nti, mitumi foro ɔfasu.
30Onyankopɔn de, nʼakwan yɛ pɛ;
ma wɔn a wɔhwehwɛ bammɔ wɔ ne mu.
31Na hena na ɔyɛ Onyankopɔn ka Awurade ho?
Hena na ɔyɛ Ɔbotan no? Gye sɛ yɛn Nyankopɔn no.
33Ɔma mʼanammɔn ho yɛ hare sɛ ɔforote de.
34Osiesie me ma ɔko,
na me basa tumi kuntun kɔbere mfrafrae tadua.
35Wode wo ogye boa me nkatabo,
na wo nsa nifa ma me gyina.
Wobrɛ wo ho ase ma meyɛ ɔkɛse.
36Woabɔ kwan tɛtrɛɛ ama mʼanan
sɛnea me nkotodwe rengurow.
37Metaa mʼatamfo kɔtoo wɔn;
mansan mʼakyi kosii sɛ mesɛee wɔn.
38Mɛdwerɛw wɔn, na wɔantumi ansɔre,
wɔhwehwee ase wɔ mʼanan ase.
39Wode akodi ahoɔden maa me;
womaa mʼatamfo bɔɔ wɔn mu ase wɔ me nan ase.
40Womaa mʼatamfo dan wɔn ho guanee,
41Wosu hwehwɛɛ mmoa, nanso obiara ammegye wɔn,
42Meyam wɔn sɛ mfutuma a mframa bɔ gu;
mihwiee wɔn guu sɛ mmɔnten so dontori.
43Woagye me afi nnipa no ɔfow mu,
nnipa a minnim wɔn abɛyɛ mʼasomfo.
44Wɔte me nka pɛ a, wɔyɛ osetie ma me;
ananafo kotow mʼanim.
45Wɔn nyinaa botobotow;
wofi wɔn abandennen mu ba ahopopo so.
46Awurade te ase! Ayeyi nka me Botan!
Wɔmma Onyankopɔn, me Gyefo no din so!
47Ɔno ne Onyankopɔn a ɔtɔ were ma me,
48ɔno na ogye me fi mʼatamfo nsam.
Wopagyaw me sii mʼatamfo so,
wugyee me fii basabasayɛfo nsam.
49Ɛno nti, mɛkamfo wo wɔ amanaman mu, Ao Awurade.
Mɛto ayeyi dwom ama wo din.
50Wode nkonimdi akɛse ama wo hene;
woda ɔdɔ a ɛnsa da adi kyerɛ nea woasra no ngo,
wode kyerɛ Dawid, ne nʼasefo afebɔɔ.
AKCB : Nnwom 18